सैतानको समाजमा | यस अनन्त ब्रह्माण्ड
पोस्ट शक्ति . पैसा . म्याट्रिक्स . Awakening . Satanism . व्यर्थ . सभ्यता
मृत्यु एकताबद्ध आतंकवादी समूह को ग्रह मा जनसंख्या संग secretive युद्ध हो. यो, यो आतंकवाद देखि ग्रह मुक्त गर्न कहिलेकाहीं आवश्यक छ, जो शैलीहरू आफूलाई अख्तियार, र उचित मान्छे एक संभावित खतरा कल समृद्ध र सजिलो स्वीकार्य चोरी. पनि आफ्नो गलत द्वारा “कानून” तिनीहरूले योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता संग आपराधिक कोड आफ्नै लेख उल्लङ्घन (लेख. 206, 209-210 UKRF, लेख. 13, 17-19, 285-295 UKRB, 147, 255-270 UCU र उपयुक्त लेख द्वारा. UKSŞA, आपराधिक व्यवस्था बेलायत र अन्य देशहरूमा). विवरण हेर्नेछ: 1. अपराध लागि तयारी बनाउन, जनसंख्याको एक ढिलो विनाशको धूर्त योजना विकास. 2. जनसंख्याको धम्काउन एक गिरोह संगठन सिर्जना. 3. व्यक्तिगत संवर्धन लागि संगठित अपराध मा संलग्न. 4. आफ्नो काम गर्न इच्छा को जनसंख्या हटाउन आतंकवादी कार्यहरू (छाल रोक्ने पर्खाल: “आफ्नो ठाउँ, हामी पहिले नै कब्जा गरेका छन्”). 5. यस गिरोह को एक न्यायाधीश सदस्य को नियुक्ति. 6. निरन्तर आफ्नै च्यानल मार्फत आम disinformation को प्रेरित संलग्न. छाल रोक्ने पर्खाल: “त्यहाँ हामी थाहा छैन कुरा हो: मलाई थाहा छैन, र तपाईं थाहा छैन, र हामी थाहा सक्दैन (किनभने हामी आवश्यक), तब राम्रो थियो. र अब म आफ्नो राजा हुँ (वा राजाको henchman), र तपाईं मेरो दास हो. हामी सबै गम्भीर: तपाईं र मलाई र – तर हामी पर्छ. हामी सबै ग्रस्त छ।” (को taiga साँझ चुपचाप सुरु). 7. जानकारी को लुक्ने र अन्धकारमा hostages को पकड. 8. दमन अवसर, तरिका र प्राप्त जानकारी को विधिहरू. 9. सबै प्रकार र मिडिया को व्यापक उन्मूलन.
गर्न, थप सिक्न अपराधको संख्या कुनै पनि राज्य को आपराधिक कोड अध्ययन गर्न पर्याप्त छ र पहिलो offender गरेर धेरै राज्य हुनेछ, जो कोड मालिक. त्यहाँ किनभने तिनीहरूले प्रत्येक वस्तु तोड्न.
समाजमा बस्ने “सैतानको सन्तान”, पहिलो हेर्न र यी जैविक जीव प्रत्येक अन्य गरेको पीठ छलफल कसरी र निरन्तर यस्तै कार्यहरू गर्न सबै अरूलाई अस्वीकार आश्चर्य. र मौका एक पूर्ण मूर्ख र केवल आवश्यक छलफल गर्न, घृणा को एक वृद्धि ट्रिगर गर्न. जीव छैन नैतिक र जैवअपघट्य गर्न susceptible सबै askance हेर्न हो: “कसरी यो छ? उहाँले किन giblets भइरहने हुन चाहनुहुन्छ छैन?”
विद्यालयमा सिक्ने खुल्लमखुल्ला सबैभन्दा lustful रूपमा पालन गर्न सक्नुहुन्छ “सैतानको सन्तान” अन्य सबै कामवासना मा नै गठन. सबैभन्दा अचम्मको कुरा, यो बाँकी खुशी र खुसीसाथ फोहर जोडतोडले. तर फिर्ता plunging, केही मानिसहरू फिर्ता प्राप्त गर्न सक्छन्. त्यसपछि सबै संभावित शुल्क जीव को एक systemic विनाश आउँछ. चालीस को उमेर द्वारा, यो छ जब सन्तान फरक जीवन स्वाद – तिनीहरूलाई केही पर्याप्त छन्. तर माथि यो बिन्दु गर्न पुरुष सेक्स जनन र जनन विचार गर्दैन मात्र 10 जीवनको वर्ष (संग 1 गर्न 11 वर्ष) किनभने महिलाहरुको, हामी विभिन्न परिस्थितिमा र vozvrastnyh अन्तर्गत छन्, जिम्मेवारी को बदलिने डिग्री संग अनुभव जीवन, तिनीहरूले पुरुष psyche परिमार्जन गर्न आफ्नै जनन र जनन देखाउन रुचि. शायद पनि एघार वर्ष मा जवान महिलाहरुको पुरुषहरु को psyche परिवर्तन गर्न सक्षम छन्. तर teprimosti पुरुषहरु को बहुमत आफ्नो जीवनको पहिलो एघार वर्षसम्म मात्र पर्याप्त छ आरक्षित.
यदि स्वस्थ जैविक जीव हो संगै एक सीमित ठाउँ, जो बिरामी cretinism छन् – छैन स्वस्थ जीव कब्जा गर्न सुरु र उपलब्ध इलाकाको जिम्मेवारी, आफ्नै अस्तित्व को कुरा मा एक प्रत्याभूति लाभ प्राप्त गर्न. यो मात्र वरपरको क्षेत्र को क्रमबद्घ विनाशमा, तर पनि स्वस्थ जनावरहरू को अत्यावश्यक कार्यहरु को त्वरित विनाश. जब कब्जा क्षेत्रमा क्रेटिन्स सबै व्यक्तिहरूलाई गायब, एक उचित लाभ ल्याउन – त्यहाँ एक पूर्ण महत्वपूर्ण प्रजाति को आत्म-विनाश छ. प्रश्न: “किन पढन्तेहरूका शक्ति पक्रन व्यवस्थापन?” – एउटा उदाहरण जवाफ सजिलो तरिका. उहाँले पोखे जब स्वस्थ शरीर के “भावनात्मक माटोको”, र splatter “स्नायु र्याल” मुख? यदि – कुनै, शक्ति स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई लागि संघर्ष गुमाउनु.
आफ्नै व्यवहार “अनुतरदायी पढन्तेहरूका” केही कारण भनिन्छ नीति लागि, नीति संग हुनत यो सामान्य सानो छ. कब्जा, आवश्यक वस्तुहरूको केही तिनीहरूले निर्धारित प्रदर्शन उत्पादन. Chesche सबै तिनीहरूले प्ले neslyshane वा गलतफहमीले, तर आफूलाई सधैं रूपमा प्रस्तुत, तपाईं यो सबै आफूलाई व्याख्या गर्न, समाधान, बुझ्न र केवल के गर्न, तिनीहरूले सुन्न तयार छन् र के तिनीहरूले रुचि र अरू धेरै छैनन् भनेर, र आफ्नो लक्ष्य, समय को लागि रहेको, प्रतीक्षा, किनभने, बहिष्कृत छैन, कि “deranged बेवकूफ” तपाईंको मस्तिष्क slavish उपासनामा skultivirovannoe सूचना र ध्यान! यो क्रमबद्घ छलछाम को फलस्वरूप उपयोगी जीवन गायब…
अक्सर, “पागल cretinism” यो शक्ति पकड प्रयोग, जब आक्रमण शक्ति केहि उपयोगी, गुणस्तरीय र के गर्न सक्दैन, र गुमाउन अनिच्छा “उपयोगिता फिडर” सेना व्यवहार, सबै तर उहाँलाई मूर्ख महसुस, र बस मौन अघि benevolent कारणहरू लगनशील “ohamevshey upstart”.
तपाईं आफ्नो शरीर को निपटान मा प्राप्त गर्न व्यवस्थापन भने, आफ्नो मन र प्रतिभा अनुरूप – सम्भवत यो ती मा दाह कारण हुनेछ, जो व्यवस्थापन गर्नेछ “तपाईं नजिक प्राप्त गर्न”. परिस्थिति आधारमा, आमाबाबु र आफन्तहरूको वैमनस्यता को फैलने हुन सक्छ. स्थिति, aggravated, यसलाई विश्वासघात पुग्न सक्दैन. सामान्यतया, यो हुन्छ, यदि तपाईंको दृश्य आफन्तहरूले को नजर मेल खाँदैन, जो विश्वास, तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ. विश्वासघात प्रकारका विभिन्न खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, र, सामान्यतया, जीवनमा आफ्नो स्थिति कब्जा विनाश उद्देश्य. सफल भने, जोखिम वस्तु अर्थहीन पछि जीवन छ. TK. कृत्रिम मान साँचो लक्ष्य प्रतिस्थापन गर्न सक्षम छन्.
दुर्भाग्यवश षड्यन्त्र नातेदार मात्र अन्त छैन. जब “आनन्द को पखेटा” र आफ्नो लिक उपयोगी जानकारी को सामान्य तरिकाले-जा अनुमति हुनेछ – तपाईं शत्रुहरू परिणत गर्न आफ्नो साथीहरू र राम्रो-wishers गर्न छक्क क्षमता हुनेछ, अशिष्ट र मुखर Ucronia जवाफ. शायद, मृत्यु को सुविधा ग्रह सम्भव कुनै पनि तरिकामा क्षणिक सुख खातिर सबै उपयोगी तत्व नष्ट गर्ने प्रयास हो. केही डाह बाहिर यो गर्न, किनभने लाभ लागि इच्छा को अरूलाई, कुनै पनि औचित्य र कारण बिना शक्ति को लागि इच्छा को तेस्रो. तर अन्त मा जीवन पूर्ण विनाश हो. ब्रह्माण्ड अपराधीहरूमाथि अन्तिम expulsion सुनाइसकेको.
विश्वासघात जोस कारण उत्पन्न गर्न सक्छ, पनि अभिभावक. सन्तानका गर्दा आंशिक वा पूर्ण वयस्क जीवनको जान. जाहिर महिला psyche vseobladanie मान्छ “izvergnutыm” वस्तु. अनि डाह चमक कुनै कारण लागि लगभग उत्पन्न गर्न सक्छ, यसलाई जवान को आन्दोलन मा सबै जानकारी नियन्त्रण गर्न सामान्यतया असम्भव छ भने पनि.
ग्रह मृत्यु मा प्रतिभाशाली प्राणी किनभने betrayals मात्र निराश छैन आशा, तर पनि वरपरका ईर्ष्या, जो जीवनको तिनीहरूलाई साथ दिनु गर्न प्रशस्त हुनेछ. यो तथ्यलाई कारण छ, कुनै पनि मामला मा कि upstart प्रतिभा गल्ति शक्ति जफत साझेदारी गर्न अभिप्राय छैन. प्रतिभाशाली प्रविधि विस्मित किनभने, र उनको हानि को अन्त मा शक्ति ती को कल्पना. निभाए शो नक्सा तर शक्ति क्षेत्र संग, प्रतिभाशाली र सिपालु सतावट र विशेष सेवाहरू लागि सिकार आशा र संकुचित spitsializirovannyh “सर्कल Satanists”. पारंपरिक गर्दा “विपत्ति कीडे” , कुनै पनि चलाख हुन सक्षम, कुनै प्रतिभा, बस डाह हुनेछ र, संभवतः, कुराकानी मा हँसाइ. प्रतिभा किनभने – यसलाई स्पष्ट ठूलो कुरा पाउन सक्ने क्षमता छ. र सबै, जसलाई नयाँ प्रविधि stanovistsya ज्ञात र उपलब्ध, यो रूपमा भने तिनीहरूले पनि, त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो वा एउटै खोल्ने गर्न सुरु, वा सबैलाई राम्रो गर्न सक्छन्. केही, पनि, किनभने आफ्नै nesderzhennosti कराउँछन् गर्न सक्नुहुन्छ: “भाइ, कसरी म आफैलाई dogodalsya!?” आखिर,, सबै शानदार – बस.
तपाईं एक प्रतिभा हुनुहुन्न भने पनि, बस सुन्दर वा सुन्दरी जन्म – यस्तै भाग्य पर्खिरहेको. त्यसैले, एक मात्र आफ्नो उपस्थिति ईर्ष्या र आक्रमण गर्नाले. कमजोर जीव बेहोश अवस्थामा र consciously बुझ्न को लागि, तपाईंको उचाइ तिनीहरूलाई लागि achievable छैन कि. र पनि सुन्दर यदि “जीव” निःशुल्क वेश्या बन्न, क्रममा छ कि सबै गर्न सक्छन् “बकवास सौन्दर्य” – आफ्नो, जे भए पनि, घृणा गर्नेछन्, किनभने “समस्या सीट” अन्यत्र लुकाउने. स्पष्ट, यो सबै किनभने, कि सुन्दर फारम – यसलाई केही डिग्री एक प्रतिभा छ. सत्य, सधैं यो समर्थन योग्य छन् “मानिसहरू”. तथापि, मालिकको र सुन्दर, छैन प्रकारका मात्र योग्य छैन पारित गर्नुपर्छ “विशिष्ट कल्याण उपचार”.
सुन्दर “महिलाहरुको र पुरुषहरु” जीवन घृणा को क्रमबद्घ फैलन सँगसँगै छ. तर यी अशुद्धताओं हालियो भइरहेको बिर्सनु हुँदैन, सबै भन्दा राम्रो प्रशंसा तपाईँको सौन्दर्य महिलाहरु unwarranted अपमान हो, बाट संक्रमित मात्र होइन “कुकुर रोग”. ग्रह मृत्यु मा घृणा र ईर्ष्याले सधैं प्रयास गरिएको छ “राख्न गति” सौन्दर्य साथ.
ठाउँ सधैं संसारमा घृणा छ genienenavistnikov.
महिला प्राण को माग्नेहरूलाई, मात्र baskervilskoy नस्ल, तिनीहरूले अलग रूपमा संसारभरि dissect रुचि, रूपमा तेल क्षेत्र को मालिक के. र सबै decomposing कार्यक्रम पछि आफ्नो bioform मा एक घर पाउनुहुनेछ – तिनीहरूले गर्न borehole देखि कालो slurry मा प्राप्त गर्न सक्छन्. पक्कै पनि, सम्झाउनुपर्छ, कि व्यवहार “महिलाहरुको” तपाईं स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले मानिसहरू घृणा.
“महिलाहरुको” यो “कायरता रक” कुनै पनि आफैलाई छनोट गर्न प्रयास “आक्रामक JERK” संभोग लागि साझेदार रूपमा. यदि “पार्टी जलाए”, त्यसपछि अर्को प्रयास मुर्ख भाग हुनेछ. विफलता को घटना मा लिन्छ amorphous तर नियंत्रित ठाउँ केहि. सबैभन्दा होनहार गलत बाटोमा लैजाने, कुनै एक गए र व्यर्थमा बस्नुहुन्थ्यो. (थप सावधान आफू र आफ्नो प्रकारको बारेमा थप सोच्न होनहार।) भ्रष्ट जीवन, नजिक पारित – को, तिनीहरूले सबैभन्दा प्रतिभाशाली हेर्न बाध्य छन्. विश्व overpopulated सन्तानहरू “लाटा महिलाहरुको” वृद्धि गर्छ perversity. यो आफ्नो डीएनए मा निहित छ लागि. कारण आनुवंशिक को अयोग्यताको गर्न “महिलाहरुको hews गधा क्रोधित कुकुर”. तर चाहेको र प्राथमिक प्रयासमा भने, पनि तिनीहरूले एकदम आफ्नै अवस्था सुधार गर्न सक्छ. यो आवश्यक छैन कम आवृत्तियों नै चुस्नु गर्न अनुमति छ. र सबै कायम र प्रतिभा विकास गर्न केन्द्रित गर्न छ. पाठ्यक्रम, यसलाई त्यहाँ सजिलो तरिका के, जहाँ पहिले नै छ, जब को समर्थन शानदार र सकेसम्म प्रतिभाशाली. सामान्य ग्रह र बनाउन: सबैभन्दा होनहार स्वतन्त्रता र अवसर को सबै भन्दा ठूलो संख्या हो, अधिकतम लाभ ल्याउन. तर स्थिति को peculiarity छ, यदि यी सिफारिसहरू पछि छैनन् भनेर – यस दोषपूर्ण वस्तुहरू एक विशिष्ट निर्वासनमा विषय हुनेछ.
degenerate दौड, यसको विविधता मा बदनाम, तिनीहरूले मस्तिष्क गतिविधि को गुणस्तर क्षमता गुमाउन, र तिनीहरूले खोपडी napoiminat धूपदान सुरु. यस्तै कंपन संग अनुनाद सेट द्वारा तिनीहरूले प्रकृति मा नै संगीत सुन्न सुरु, जो रूपमा विशेषता सकिन्छ “संगीत पट”. ठूलो प्रभाव यो एक धेरै नीरस तस्वीर सिर्जना…
·0• ◪◩ टाटु - तिनीहरूले पकड छैन ◪◩ •0·
ग्रह मा मृत्यु को ठूलो मात्रा विस्तार मात्र प्रमोदवनमा गर्न लाग्न सक्छ “बरु बकवास जीव”, कुनै पनि बिग्रेको अवस्था लाभ कि. सामान्यतया यो decomposed आदेश मामलामा होनहार सामान्य लाइनको सन्तान छ. र एक पटक तिनीहरूले एक degenerate दौड सबै प्रतिनिधिको अगाडि छन् – पक्कै पनि, कल गर्न तिनीहरूले सही हुनेछ “geeks”. र यो छैन भने – प्रमाणित.
शैतानी संसारहरू मा सेलिब्रिटी र महिमा चयन गर्न खोज्छ “उदाहरणीय चूहों”, सीमित. संरचना गर्न अन्यथा खतरनाक.
सबै भन्दा साधारण यौन जोडे – 30 वर्ष “पुरुष” र 18 वर्ष “samke”. यस्तो संघ आदर्श छ “decomposing सद्भाव”. तर यहाँ, हामी बेवास्ता भने 10 वर्ष – सफल, कि “पुरुष” 20 वर्ष, र “samke” मात्र 8. यी अवस्थाहरू pedophilia smack के? तर एकदम अक्सर त्यहाँ “यूनियन” 50/18 – कि पनि सबैभन्दा स्थिर psyche प्रभावित हुन सक्छ: शायद, यो विकृति केही रुप हो. तर तपाईं पनि अधिक वैश्विक छोड्नु हुन्छ भने – degenerated प्राण, जो मा 30 000 वर्ष पूर्णतया नयाँ प्राण एउटा सम्बन्ध फारम गर्न सक्छन्. र यहाँ आकार विचलन निर्धारण गर्न साधारण गाह्रो हुन्छ. उसोभए, तपाईं अझै पनि एक सूत्र र पूर्वजन्ममा को एक प्रणाली थप्न यदि – यी सबै यौन सम्बन्ध एक खेल जस्तै धेरै छ “समूह camomile” समयमा विस्तार. साँच्चै, राम्रो रही, कि विश्व दिनुभयो, यो ब्रह्माण्ड मा केही perverts को आत्म-सन्तुष्टि खातिर छ? etozhe धेरै गम्भीर अपराध पछि. उपचार गर्न ती सबै पठाउन सक्नुहुन्छ?
बिग्रेको परिवार एकाइहरु को निष्कर्षमा, जो भनिन्छ “विवाह”, छोराछोरीलाई जन्म छन्, जो “सिस्टम” बिग्रेको मानिन्छ प्रदान गर्दछ, शायद, त्यसैले, परिवार एकाइ एक अस्वस्थ भावनात्मक व्यक्तिहरूको पारिवारिक जीवन लागि तयार outbursts लागि निष्कर्षमा छ, बाहेक कि “विवाह” र बोलाउन. यी गरिब बच्चाहरु, पूर्ण गलतफहमीले मा: किन उनि यहाँ “चूसा” – लगातार नेताओं प्ले लाम “बक्स मा”, त्यसैले केहि बुझिन.
♡ ★ ♥ समय मिसिन – जलेको ♡ ★ ♥
ღ ஐ AUM Margot Reisinger – मन परिवर्तन ஐ AUM ღ
अप्रिल 2013 Gregorian.
PS. अगाडि: ठाउँ मा.